Iza i Jesosy Kristy? Andriamanitra sa Zanak’Andriamanitra?
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abkazianina Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Alemà Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Ateso Attié Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boulou Bété Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Efik Emberá (Catío) Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fon Frantsay Futuna (Atsinanana) Ga Galoà Gitonga Gokana Goun Grika Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guéré Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kurde Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lari Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathe Mazahua Mbunda Mende Meru Mizo Mongol Mooré Myama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngabere Ngangela Nias Niue Norvezianina Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Pendjabi (Shahmukhi) Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Boligaria) Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tarahumara Afovoany Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Ivoarianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Népali Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Vietnamianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Urhobo Uruund Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wichi Wolaita Yacouba Zandé Zoloa Édo Éwé
2 Mety ho efa naheno momba an’i Jesosy Kristy ianao, na dia efa tamin’ny 2 000 taona lasa aza izy no tetỳ an-tany. Tsy mahalala tsara an’i Jesosy anefa ny ankamaroan’ny olona. Misy miteny hoe olona tsara fanahy izy, na koa mpaminany. Misy indray mino hoe Andriamanitra izy. Ary ahoana ny hevitrao?—Jereo ny Fanamarihana 12.
3. Nahoana ianao no mila mahafantatra an’i Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy?
3 Mila mahafantatra tsara an’i Jesosy anefa ianao. Hoy mantsy ny Jaona 17:3: “Mba hahazoan’izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy ny mianatra hahalala anao, ilay hany tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao.” Ho afaka hiaina mandrakizay eto an-tany ianao raha fantatrao hoe iza marina i Jehovah sy Jesosy. (Jaona 14:6) Mila mahafantatra tsara an’i Jesosy koa ianao, satria tokony hanahaka azy. Nahay nifandray tamin’olona izy sady hafa mihitsy ny fomba fiainany. (Jaona 13:34, 35) Efa nianatra momba an’Andriamanitra isika tao amin’ny Toko 1. Hojerentsika kosa izao izay lazain’ny Baiboly momba an’i Jesosy.
EFA HITANAY NY MESIA!
4. Inona no dikan’ny hoe “Mesia” sy “Kristy”?
4 Mbola tsy teraka i Jesosy dia efa nolazain’i Jehovah tao amin’ny Baiboly hoe halefany etỳ an-tany ny Mesia na Kristy. Avy amin’ny teny hebreo ny hoe “Mesia”, ary avy amin’ny teny grika ny hoe “Kristy.” Olona notendren’Andriamanitra hanao zavatra manokana no dikan’ny hoe Mesia sy Kristy. Izy no hanatanteraka an’izay rehetra nampanantenain’Andriamanitra. Mahasoa anao koa ny zavatra nataony tetỳ an-tany.
5. Nino ve ny mpianatr’i Jesosy hoe izy no Mesia?
5 Tsy nisalasala mihitsy ny mpianatr’i Jesosy hoe izy no Mesia. (Jaona 1:41) Izao, ohatra, ny tenin’i Simona Petera tamin’i Jesosy: “Ianao no Kristy.” (Matio 16:16) Ahoana no ahalalantsika fa i Jesosy tokoa no Mesia?
6. Inona no nataon’i Jehovah mba hahafantaran’ny olona an’ilay Mesia?
6 Nilaza zavatra be dia be momba ny Mesia ny mpaminanin’Andriamanitra mba hahafantaran’ny olona azy. Mbola tsy teraka i Jesosy tamin’izany. Mitovitovy amin’izao izany: Misy olona mbola tsy hitanao mihitsy nefa asaina tsenainao eny amin’ny toerana be olona. Ho fantatrao ilay olona raha hazavaina tsara aminao ny paoziny. Hoatr’izany no nataon’i Jehovah. Ny mpaminaniny no nasainy nilaza tamintsika an’izay hataon’ilay Mesia sy izay hitranga aminy. Rehefa tanteraka tamin’i Jesosy ireny faminaniana ireny, dia fantatry ny olona hoe izy no Mesia.
7. Milazà faminaniana roa manaporofo hoe i Jesosy no Mesia.
7 Ireto misy faminaniana roa. Voalohany, 700 taona talohan’ny nahaterahan’i Jesosy dia efa nilaza i Mika fa ho teraka ao amin’ny tanàna kely atao hoe Betlehema ny Mesia. (Mika 5:2) Tao tokoa i Jesosy no teraka! (Matio 2:1, 3-9) Faharoa, tanteraka koa ilay tenin’i Daniela hoe hiseho amin’ny taona 29 ny Mesia. (Daniela 9:25) Vao roa fotsiny ireo, fa mbola be dia be ny faminaniana manaporofo hoe i Jesosy no Mesia.—Jereo ny Fanamarihana 13.
Lasa Mesia na Kristy i Jesosy tamin’izy natao batisa
8, 9. Inona no nitranga tamin’i Jesosy natao batisa, ka manaporofo hoe izy no Mesia?
8 Nataon’i Jehovah mazava tsara fa i Jesosy no Mesia. Nampanantena an’i Jaona Mpanao Batisa aloha i Jehovah hoe hanome azy famantarana mba hahalalany an’ilay Mesia. Hitan’i Jaona io famantarana io tamin’i Jesosy natao batisa teo amin’ny Reniranon’i Jordana, tamin’ny taona 29. Hoy ny Baiboly: “Raha vao vita batisa i Jesosy, dia niakatra avy tao amin’ny rano. Ary nisokatra ny lanitra, ka hitan’i Jaona ny fanahin’Andriamanitra, nidina toy ny voromailala nankeo ambonin’i Jesosy. Injay koa nisy feo avy any an-danitra nanao hoe: ‘Io no Zanako malalako, izay sitrako.’” (Matio 3:16, 17) Hitan’i Jaona ilay famantarana sady henony ka fantany hoe i Jesosy ilay Mesia. (Jaona 1:32-34) Tamin’io andro io i Jesosy no lasa Mesia, satria tamin’io i Jehovah no nandatsaka fanahy masina taminy. Izy no nofidin’Andriamanitra ho Mpanjaka sy Mpitarika antsika.—Isaia 55:4.
9 Na ny faminanian’ny Baiboly, na ny tenin’i Jehovah, na ilay famantarana tamin’ny batisan’i Jesosy, dia samy manaporofo fa i Jesosy ilay Mesia. Taiza anefa i Jesosy taloha? Hoatran’ny ahoana ny toetrany? Andao hojerentsika ny Baiboly.
TAIZA I JESOSY TALOHA?
10. Inona no lazain’ny Baiboly momba an’i Jesosy?
10 Milaza ny Baiboly fa efa tany an-danitra ela be i Jesosy, vao nanketỳ an-tany. Nilaza i Mika hoe efa nisy “hatramin’ny taloha ela be” ny Mesia. (Mika 5:2) Imbetsaka koa i Jesosy no niteny fa efa tany an-danitra izy, talohan’ny nahaterahany teto an-tany. (Vakio ny Jaona 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Nifandray be izy sy Jehovah tamin’izy mbola tany an-danitra.
11. Nahoana i Jehovah no tena tia be an’i Jesosy?
11 Tena tia be an’i Jesosy i Jehovah. I Jesosy mantsy no noforoniny voalohany indrindra, izay izy vao nanao ny zavatra rehetra sy ny olona. Izany no iantsoana azy hoe “lahimatoa amin’ny zavaboary rehetra.” * (Kolosianina 1:15) Tena tian’i Jehovah koa izy satria izy ihany no noforoniny mivantana. Izany no iantsoana azy hoe “Zanany lahitokana.” (Jaona 3:16) I Jesosy irery koa no nampiasain’i Jehovah tamin’izy namorona ny zavatra hafa rehetra. (Kolosianina 1:16) I Jesosy ihany no antsoina hoe “ny Teny”, satria izy no nasain’i Jehovah nampita hafatra tamin’ny anjely sy ny olombelona.—Jaona 1:14.
12. Nahoana no tsy mitovy i Jesosy sy Andriamanitra?
12 Misy mino fa mitovy ihany i Jesosy sy Andriamanitra. Tsy izany anefa no ampianarin’ny Baiboly. Voalaza ao fa noforonina i Jesosy, izany hoe tsy nisy izy taloha fa lasa nisy. I Jehovah kosa efa nisy hatramin’ izay, ary izy no namorona ny zava-drehetra. (Salamo 90:2) Zanak’Andriamanitra i Jesosy ka tsy nieritreritra ny hitovy amin’Andriamanitra mihitsy. Mazava ny lazain’ny Baiboly, dia hoe ny Ray lehibe noho ny Zanaka. (Vakio ny Jaona 14:28; 1 Korintianina 11:3.) I Jehovah ihany no “Andriamanitra Mahery Indrindra.” (Genesisy 17:1) Izy no ambony sy matanjaka indrindra eo amin’izao rehetra izao.—Jereo ny Fanamarihana 14.
13. Nahoana ny Baiboly no miteny hoe “endrik’ilay Andriamanitra tsy hita maso” i Jesosy?
13 Efa an’arivony tapitrisa taona i Jehovah sy Jesosy no niara-niasa. Mbola tsy nisy ny lanitra sy ny tany tamin’izany. Azo antoka fa nifankatia be izy mianaka! (Jaona 3:35; 14:31) Antsoin’ny Baiboly hoe “endrik’ilay Andriamanitra tsy hita maso” i Jesosy, satria tena nitovy tamin’ny toetran’i Jehovah ny toetrany.—Kolosianina 1:15.
14. Ahoana no nahatonga an’i Jesosy ho lasa olombelona?
14 Nanaiky hiala tany an-danitra io Zanak’i Jehovah io mba ho lasa olombelona teto an-tany. Nanao fahagagana i Jehovah mba hanaovana an’izany. Nataony tao an-kibon’ilay vehivavy virjiny atao hoe Maria io Zanany io. Tsy nanana dada olombelona àry ilay zaza ka lavorary rehefa teraka. Nataon’i Maria hoe Jesosy ny anarany.—Lioka 1:30-35.
NY TOETRAN’I JESOSY
15. Inona no hanampy anao hahafantatra tsara an’i Jehovah?
15 Hahafantatra ny fiainan’i Jesosy sy ny toetrany ianao, raha mamaky ny Matio, Marka, Lioka, ary Jaona. Antsoina hoe Filazantsara ireo boky ao amin’ny Baiboly ireo. Ho fantatrao tsara koa i Jehovah raha mamaky an’ireo ianao, satria mitovy be ny toetran’i Jehovah sy Jesosy. Izany no nahatonga an’i Jesosy hiteny hoe: “Izay nahita ahy dia nahita ny Ray koa.”—Jaona 14:9.
16. Inona no nampianarin’i Jesosy? Avy amin’iza ny zavatra nampianariny?
16 Nantsoin’ny olona hoe “Mpampianatra” i Jesosy. (Jaona 1:38; 13:13) “Ny vaovao tsaran’ilay fanjakana” no tena nampianariny. Inona io Fanjakana io? Fanjakan’Andriamanitra any an-danitra. Tsy hijaly intsony ny olona rehefa hitondra eto an-tany izy io. (Matio 4:23) Avy amin’i Jehovah ny zavatra rehetra nampianarin’i Jesosy. Hoy izy: “Tsy ahy ny fampianarako, fa an’ilay naniraka ahy.” (Jaona 7:16) Nampianatra momba ny Fanjakan’Andriamanitra i Jesosy satria tian’i Jehovah hahafantatra an’izany ny olona.
17. Taiza i Jesosy no nampianatra? Nahoana izy no niezaka mafy nampianatra ny olona?
17 Taiza i Jesosy no nampianatra? Tany amin’izay nahitany olona, ohatra hoe tany ambanivohitra, tany an-tanàn-dehibe, teny an-tsena, tany amin’ny toeram-pivavahana, ary tany an-tranon’olona. Tsy ny olona no nandrasany hankany aminy, fa izy mihitsy no nanatona. (Marka 6:56; Lioka 19:5, 6) Tena niezaka i Jesosy nampianatra ny olona, ary nanokana fotoana be tamin’izany. Fantany mantsy hoe izany no tian’Andriamanitra hataony, ary nankatò ny Rainy foana izy. (Jaona 8:28, 29) Nampianariny koa ny olona satria nampalahelo azy. (Vakio ny Matio 9:35, 36.) Tsy nampianatra ny marina momba an’Andriamanitra sy ny Fanjakany mantsy ny mpitondra fivavahana tamin’ izany. Nitory ny vaovao tsara tamin’ny olona betsaka araka izay azony natao àry izy.
18 Tia olona i Jesosy sady tia nikarakara azy ireo. Tsara fanahy izy ary mora niresahana. Na ny ankizy aza tia niaraka taminy. (Marka 10:13-16) Nanao ny rariny foana izy. Tsy tiany ny tsolotra sy ny tsy rariny. (Matio 21:12, 13) Tsy nohajaina ny vehivavy tamin’izany ary be dia be ny zavatra tsy navela nataony, nefa i Jesosy nanaja azy ireny foana. (Jaona 4:9, 27) Nanetry tena be koa izy. Nanasa ny tongotry ny mpianany izy, indray mandeha, nefa ny mpanompo no tokony hanao an’izany.—Jaona 13:2-5, 12-17.
Nitory tany amin’izay nahitany olona i Jesosy
19. Manomeza ohatra mampiseho hoe fantatr’i Jesosy izay tena nilain’ny olona, ary te hanampy azy ireo izy.
19 Fantatr’i Jesosy izay tena nilain’ny olona, ary te hanampy azy ireo izy. Jereo ange izay nataony rehefa nanasitrana e! (Matio 14:14) Nampiasa ny herin’Andriamanitra izy mba hanaovana fahagagana ho an’ny olona. Nankeo aminy, ohatra, ny boka iray ary niteny taminy hoe: “Raha mba sitrakao fotsiny mantsy ny hanadio ahy, dia ho vitanao izany.” Nampalahelo an’i Jesosy ilay lehilahy satria narary sy nijaly. Te hanampy azy àry izy ka nikasika an’ilay lehilahy, ary niteny hoe: “Sitrako tokoa. Madiova ianao.” Dia sitrana ilay boka. (Marka 1:40-42) Faly be ilay lehilahy!
TSY NIVADIKA TAMIN’NY RAINY MIHITSY IZY
20, 21. Inona no nataon’i Jesosy ka tokony hotahafintsika?
20 Nankatò an’Andriamanitra foana i Jesosy ka tokony hanahaka azy isika. Tsy nivadika tamin’ny Rainy mihitsy izy na inona na inona nitranga, ary na inona na inona nataon’ny olona tsy tia azy. Tsy nanota, ohatra, izy rehefa naka fanahy azy i Satana. (Matio 4:1-11) Tsy nino koa ny havany sasany hoe izy no Mesia ary nolazain’izy ireo fa “voa ny sainy.” (Marka 3:21) Nanao an’izay nasain’Andriamanitra nataony foana anefa izy. Tsy nivadika tamin’Andriamanitra mihitsy koa izy ary tsy namaly faty, na dia ratsy fanahy taminy aza ny olona tsy tia azy.—1 Petera 2:21-23.
21 Tsy nivadika tamin’i Jehovah mandra-pahafatiny i Jesosy, na dia nampijalijalina be aza. (Vakio ny Filipianina 2:8.) Eritrereto ange ny zavatra niaretany e! Nosamborina izy, nendrikendrehina hoe niteny ratsy an’Andriamanitra, notsarain’ny olona ratsy fanahy, nihomehezan’ny olona, ary nampijalin’ny miaramila sy nofantsihany tamin’ny hazo. Hoy izy rehefa ho faty: “Vita!” (Jaona 19:30) Natsangan’i Jehovah izy rehefa afaka telo andro ary lasa fanahy. (1 Petera 3:18) Niverina tany an-danitra i Jesosy, herinandro vitsivitsy tatỳ aoriana. “Nipetraka teo ankavanan’Andriamanitra” izy, ary niandry aloha. Notendrena ho Mpanjaka izy tatỳ aoriana.—Hebreo 10:12, 13.
22. Inona no mety ho azontsika noho ny zavatra nataon’i Jesosy?
22 Efa fikasan’i Jehovah ny hanome antsika fiainana mandrakizay. Afaka mahazo an’izany isika satria tsy nivadika tamin’ny Rainy mihitsy i Jesosy ka maty. Izany no hodinihintsika ao amin’ny toko manaraka.
^ feh. 11 Antsoina hoe Ray i Jehovah satria izy no Mpamorona. (Isaia 64:8) Zanak’Andriamanitra kosa i Jesosy satria noforonin’i Jehovah. Antsoina hoe zanak’Andriamanitra koa i Adama sy ny anjely.—Joba 1:6; Lioka 3:38.
HEVITRA 1: I JESOSY NO MESIA
“Ianao no Kristy.”—Matio 16:16
Ahoana no ahalalantsika fa i Jesosy no Mesia?
Nampahafantarin’i Jehovah hoe Zanany i Jesosy.
Tanteraka tamin’i Jesosy daholo ny faminaniana momba ny Mesia.
HEVITRA 2: ANJELY I JESOSY TAMIN’IZY MBOLA TSY TETỲ AN-TANY
‘Nidina avy any an-danitra’ izy.—Jaona 6:38
Inona no nataon’i Jesosy tany an-danitra?
Namorona an’i Jesosy aloha i Jehovah, avy eo izy nampiasa an’i Jesosy mba hamoronana ny zavatra hafa rehetra. Be dia be ny zavatra nianaran’i Jesosy tamin’ny Rainy nandritra ny an’arivony tapitrisa taona.
Nirahin’i Jehovah hanketỳ an-tany i Jesosy.
HEVITRA 3: TIA OLONA I JESOSY
“Avelao ny zaza hanatona ahy.”—Marka 10:14
Inona ny toetran’i Jesosy tianao?
Tsara fanahy i Jesosy ka tian’ny olona ny niresaka taminy.
Nanaja ny vehivavy i Jesosy.
Nanetry tena i Jesosy.
Tia nanampy olona i Jesosy.
HEVITRA 4: NATAON’I JESOSY FOANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA
“Vitako ny asa nasainao nataoko.”—Jaona 17:4
Inona no nataon’i Jesosy ka tokony hataontsika koa?
Tsy nivadika i Jesosy rehefa naka fanahy azy ny Devoly.
Nanao ny sitrapon’Andriamanitra i Jesosy na naneso azy aza ny havany.
Tsy namaly faty i Jesosy.
Tsy nivadika tamin’i Jehovah mandra-pahafatiny i Jesosy.
Natsangan’i Jehovah tamin’ny maty i Jesosy ary lasa any an-danitra.
Ho hitanao ato fa tena misy vokany lehibe eo amin’ny tantaran’olombelona ny fisian’i Jesosy.